Croquette ovy sy fromazy | Bezzia
Croquette ovy sy fromazy
Maria vazquez | 27/04/2021 10:00 | Hanombohana
Rehefa hitanay ireo croquette ovy sy fromazy ao amin'ny mombamomba ny mpahay sakafo mahavelona Raquel Bernacer fantatray fa tsy maintsy manomana azy ireo any an-trano izahay. Avy eo dia hitantsika fa manana ny olana mahazatra isika: tsy dia ampy an'io aho na tsy matetika ampiasaina ao an-dakozako io singa io ... fa ny zava-drehetra dia misy vahaolana!
Ireo croquette ireo dia tsy mitaky fanomanana bechamel hampiasaina toy ny mahazatra. Ny koba dia omanina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana hena ovy mamy, fromazy, fanosotra ary gelatin, miaraka amin'ireo akora hafa. Jelly? Azonao omena izany fa ahoana no hanam-potoana hijerena ny koba tsy mora tantanana na ny fampiasana azy aza.
Ny fotoana hamoronana croquette no marefo indrindra. Ny fanaovana ny koba dia tena tsotra, fa aorian'ny avelany hipetraka ao anaty vata fampangatsiahana dia tonga ny fotoana hanomanana ny croquette. Ary tsy ho vitanao ny mamolavola azy ireo amin'ny tananao, toy ny mahazatra. Mila sotro roa sy faharetana ianao raha hanao azy. Izy izao tsiro mamy sy volon-dronono amin'ireo croquette dia mihoatra ny manonitra izany.
385 g. hena ovy mamy (ovy lehibe 1)
1 ravina gelatin tsy miandany
60 ml. crème misy tavy 35%
Dibera iray sotrokely
55 g fromazy mozzarella (voatetika ary raraka tsara)
Atsono ny ovy. Mba hanaovana izany dia arofano hatrany amin'ny 200ºC ny lafaoro, sasao tsara ny ovy ary apetaho eo amin'ny fitoeran'ny lafaoro, hosorana menaka oliva kely. Manendasa 45 min na mandra-pahavitana. Avy eo esory ao anaty lafaoro izy ary avelao hangatsiaka.
Rehefa mangatsiaka, hydrates ny gelatin ao anaty vilia misy rano mafana mandritra ny minitra vitsy.
Amin'izany fotoana izany, manafana ny crème amin'ny vilany nefa tsy avela hangotraka. Raha vao mafana, esory amin'ny hafanana, ampio ny gelatin ary afangaro mandra-pikatsoany ary ampidirina.
Raha vao mafana ny ovy, esory ny pulp ary apetraho ao anaty lovia ny habetsany voalaza, arotsaho amin'ny fork.
Ampio ny dibera voarendrika, ny crème miaraka amin'ny gelatin, ny fromazy ary ny vanim-potoana hanandrana. Afangaro tsara, andramo sao mila ahitsinao ny sira ary apetraho ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny iray, manarona plastika amin'ny vilia plastika.
Nandeha ny fotoana, mamorona ny croquettes mampiasa sotro roa. Afangaro moramora ao anaty lafarinina sy atody nokapohina ary mofo mofomamy ireo avy eo. Atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny iray hafa izy ireo alohan'ny handrahoana azy ireo.
Finalmente endasina amin'ny menaka be dia be ny croquette hafanana anaty andiana, mamela ny tavy be loatra hivoaka amin'ny taratasy mpitroka rehefa manala ianao.
Aroso ny croquette ovy sy fromazy mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Hanombohana » Croquette ovy sy fromazy